Muva nje, izindlela ezihlukahlukene zokuthuthukiswa kwezingane ziye zathandwa kakhulu, phakathi kwazo indlela yokufundisa izingane ukuba ibhukuda ibe ethandwa kakhulu. Futhi akuyona nje imfashini, kodwa ekusetshenzisweni okungenakuguqulwa kokubhukuda ezinhlobonhlobo zomzimba.
Izinzuzo eziyinhloko zamakilasi anjalo:
ukuqinisa isimiso se-musculoskeletal;
ukuthuthukiswa kwamaphaphu nokuqinisa isifuba;
ukuthuthukiswa kwamakhono amakhulu kanye namancane amathuthuthu omntwana;
ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi ngezicubu nezitho;
ukuqinisa amasosha omzimba ngenxa yomphumela wokucima.
Ukuphikisana okubalulekile ngokuqondene nale nqubo kuba khona kwezingcingo zokubhukuda ezingasencane emntwaneni, okuphikelela ezinyangeni zokuqala komntwana wengane. Qaphela ukuthi ukucabangela kokuzalwa okuncane kancane kancane. Ngakho-ke, cishe kuze kube sekupheleni kwenyanga, ukuphefumula okucatshangelwayo kugcinwa lapho amanzi ehlangana ebusweni, futhi kuze kube izinyanga ezintathu - ukucabanga okuhamba ngokuzenzekelayo nokuhamba. Ukubhukuda okusiza ukuqinisa lezi zizindlo!
Nini ukuqala amakilasi
Ukufundisa ukubhukuda kwengane yakho kungase kuqalwe ngokoqobo kusukela ekuzalweni, ngokushesha nje lapho isilonda sempilo siphulukisa (cishe kusukela ngo-10 kuya ku-15). Nakuba isikhathi esihle sokuqhuba amakilasi ukufinyelela enyangeni yenyanga eyodwa ye-karapuza yakho. Kunconywa ukuthi uthintane nodokotela wezingane ngaphambi kokuqala izifundo zokubhukuda ukuze ungafaki ukuphikisana.
Ngakho, wanquma ukufundisa ingane yakho ukuba ibhukude! Manje udinga ukunquma lapho ukhetha indawo yamakilasi. Ngincoma ukukhawulela indlu yakho yokugezela. Okokuqala, angikhuthazi ukuthi "ngiphume" nabantwana ezindaweni ezinabantu abaningi, futhi, okwesibili, ukugeza kwakho kuyindawo engcono yokuhlanzeka emisebenzini enjalo.
Ngaphambi kokugcwalisa lokugeza ngamanzi, kufanele ihlanzwe futhi ihlanza ngamanzi ashisayo. Ekuqaleni, ngincoma ukuthi ngifake ukugeza ngamanzi abilayo, futhi uma ingane ikhula, ungenza ngaphandle kwalolu hlelo lokulungiselela.
Ukushisa kwamanzi akufanele kudlule 36ºC. Nciphise njalo amasonto amabili ngesigamu se-degree kuya ku-32ºC. Ngenqubo yokufunda ukudoba, musa ukudala umphumela wokugeza, ngenhloso yokugcina umoya omusha kusuka emakamelweni angaphansi. Ukushisa emakamelweni eduze kwendawo yokugezela kumele kube sezingeni le-20-24ºC. Ungavumeli ukudonsa okukhulu okushisa!
Kubalulekile ukugebha nomntwana 3-4 izikhathi ngesonto ngekhefu lokuphumula okuphoqelekile. Kunconywa ukuqhuba inqubo ntambama kuze kube ngu-6 kusihlwa, njengoba imisebenzi yamuva ingaba nomthelela omuhle kumntanami futhi ivimbele ukulala okuzolile.
Isikhathi sokuhlala emanzini sinqunywa ngabanye. Ekuqaleni, izifundo akufanele zinde (cishe imizuzu engu-10). Kamuva, ukuhlala emanzini kunganda uma ingane ijabulela inqubo yokubhukuda, ihole ukuqeqeshwa emaminithini angu-30-45.
Ngaphambi kokuqala koqeqesho ngincoma ukuthi ngisebenzise ukusikhipha umzimba okulula kalula komzimba wonke phakathi kwemizuzu emi-5-7.
Siqala ukufunda ukudoba
Inyanga yokuqala yamakilasi
Ekuqaleni, ukuqeqeshwa kuncishiswe ekuqeqesheni ekubambezelekeni ukuphefumula.
Into esemqoka ukufunda ukuthi ungabamba kanjani kahle ingane. Kubalulekile ukusekela isifuba esifanele ngesandla sokunene somhlathi ophansi, ngaphandle kokuthinta intamo, bese ubeka isandla sesobunxele ngemuva kwekhanda. Uma ubhukuda ngemuva, kubalulekile ukusekela ikhanda ngesandla esisodwa, enye - imbongolo. Emva kwamasonto angu-1-2, ungafundisa ingane ukuba ihambele, ithole amanzi futhi ithulule ebusweni bomntwana. Ungakhohlwa zonke izenzo zakho ukuze uhambisane nemibono enjengokuthi: "bhukuda", "dive", "phuma" ...
Inyanga yesibili yamakilasi
Ngemva kwenyanga yokuqeqesha, ungazijayeza ukuhamba ngokusekela. Ukuze wenze lokhu, "ukudilika" kuncishiswe ukuphuza ubuso bomntwana ngamanzi nokucwiliswa kalula kumzuzwana owodwa emanzini. Ngemuva kwamasonto ambalwa, isikhathi sokuphumula senyuka ngomunye umzuzwana owodwa (isikhathi sokudlula sonke kufanele senyuke kumasekhondi angu-3).
Inyanga yesithathu yamakilasi
Lena inyanga yokuhamba okuzimele! Njengoba ufunde zonke "izinto eziyisisekelo" zokubhukuda, ungaya esigabeni esibaluleke kakhulu senqubo yokubhukuda yokuqala.
Uma umntwana wakho ngokuzethemba ngaphansi kwamanzi cishe imizuzwana engama-3, akakhamuluki, akesabi amanzi, ungaqala ukukhulula izandla uma udilika. Futhi ekupheleni kwenyanga yesithathu yokuqeqesha ngemuva kokuqala ukuhamba ngaphandle kwezandla zakho, umntwana angakwazi ukubhukuda ngaphansi kwamanzi cishe 20-30 cm (kanti isikhathi sokuhlala ngaphansi kwamanzi akufanele sidlule imizuzu emine).
Wenze umsebenzi omuhle, isethi yonke yokuzivocavoca! Manje kuyadingeka ukuthi umise umzimba kahle, ugqoke ngokufanele ngenkathi. Izindwangu kumele zomiswe ngama-cotton wicks, okumele kushiywe imizuzu emihlanu. Futhi qiniseka ukuthi udle ngokuqinile, 20-30 g ngaphezu kokujwayelekile!
Uma ubhekene nengane ngaphandle kwendlu, kufanele uhambe emigwaqweni ehlobo kungekudala ngaphambi kwemizuzu engu-15-20 emva kwamakilasi, futhi ebusika - hhayi ngaphambi kwengxenye yehora.
Ngokusekelwe kulokhu okushiwo ngaphambili, wonke umzali angakwazi ukufunda ukuthi angafunda kanjani ukubhukuda. Futhi ngenxa yalokhu akudingekile ukuba ube ngumfundisi oqeqeshiwe. Kunoma yikuphi, kusukela kule nqubo, uzothola izinzuzo ezingenakuphika: qinisa isimiso semisipha, isishukela, isimiso somzimba sokuzivikela komntwana, futhi uguqule inqubo yokugeza ingangeni kwinkqubo yokujwayela "yokugaya" ebhodini lokugeza, kepha ngenqubo emnandi futhi ewusizo. Yebo, futhi wena ngokwakho uzothola imizwelo yolwandle, ubone ukuthi ingane ibhukuda kanjani!
Imithetho yokwethula ukudla okuhambisanayo ezinganeni
Indlela yokususa ama-crusts ekhanda lomntwana
Ukuphumelela kwesisindo emva kokubeletha
Amathiphu omhlengikazi: ukwethula ukudla okuhambisanayo ezinganeni
Isivivinyo 2016: izinsuku nekhalenda yama-Orthodox namaKatolika
Ukubhekana nokupheka ekhaya
Usizo lokuqala ekuphefumuleni
Indlela yokwenza umfana athi: "Ngiyakuthanda"
Amalungiselelo emifino kanye nama teas ngesikhathi sokukhulelwa
Ukuhamba ngesitimela: yini okufanele uthathe nawe
Kungakhathaliseki ukuthi kunokwenzeka ukwenza amancane ama-mimic amahlombe aphansi kakhulu emehlweni
Izimpawu zezifo zezinzwa ezinganeni
Uma indoda yakho inomuthi omncane
Ikhekhe ngaphandle kwama-biscuits e-pastry
Ama-apula anezinyosi ku-microwave
Indlela yokugcoba afrokosichki
Kusihlwa kwakusihlwa ngama-brunettes
Zithokozisa irayisi ne-gravy
Isigaba se-Caesarea: indlela efanele yokuphuma?